ओशिनिया देशहरू यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, ओशिनिया
संसार भौगोलिक क्षेत्रहरूमा विभाजित छ र ती मध्ये एक हो ओशिनिया। यो क्षेत्र मा विस्तार दुबै गोलार्ध र यो लगभग million करोड मानिसहरु बसोबास गर्दछ। तर, त्यहाँ कतिवटा देशहरू छन्, यसले कुन पर्यटन स्थलहरू लुकाउँछ, त्यहाँ कुन संस्कृतिहरूको विकास भएको छ?
ओशिनिया एउटा सानो र विविध क्षेत्र हो, यसमा अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था र अन्य धेरै गरीबहरू समावेश छन्। त्यसपछि अस्ट्रिया वा न्यूजील्याण्ड उदाहरणका लागि भानुआटु, फिजी वा टोंगासँग मिलेर बस्छन्। ओशिनिया १ that राष्ट्रहरू हुन् र आज हामी जान्दछौं कि उनीहरूले के प्रस्ताव गर्छन्।
2 ओशिनिया देशहरू
मूलतः ओशिनियाको जनसंख्या thousand० हजार वर्ष पहिले यस क्षेत्रमा आइपुगेको थियो, र युरोपियनहरूले यो १ the औं शताब्दीमा मात्र गरे, अन्वेषक र नेभिगेटरहरूको रूपमा। पहिलो श्वेत बसोबासहरूले निम्न शताब्दीहरूमा बसोबास गरे।
ओशिनिया अस्ट्रेलिया, मेलानेसिया, माइक्रोनेसिया र पोलिनेसिया समावेश गर्दछ। माइक्रोनेसियामा मारियाना टापु, क्यारोलिनास, मार्शल टापु र किरिबाती टापुहरू छन्। मेलानेसियामा न्यु गिनिया, बिस्मार्क टापु, सोलोमन टापु, भानुआटु, फिजी र न्यू क्यालेडोनिया पर्छन्। पोलिनेसिया हवाई देखि न्यूजील्याण्ड सम्म चल्छ र टुभालु, टोकलाउ, सामोआ, टोंगा, केर्माडेक टापु, कुक टापु, सोसाइटी टापु, अष्ट्रेलिया, मार्क्कास, टुआमोटु, मंगारेभा र इस्टर टापु सामेल छन्।
प्रायः ओसिनिया बनाउने टापु प्रशान्त प्लेटको हो, एक महासागर टेक्टोनिक प्लेट जुन प्रशान्त महासागरको मुनि छ। यसको अंशका लागि, अष्ट्रेलिया इन्डो-अष्ट्रेलियाली प्लेटको अंश हो, जुन ग्रहमा सब भन्दा पुरानो जमिन हो, तर यो प्लेटको बीचमा भएकोले यसको ज्वालामुखीको गतिविधि छैन। त्यो न्युजील्याण्ड र अन्य टापुहरूसँग मिल्छ, जुन तिनीहरूको ज्वालामुखीको लागि परिचित छ।
ओशिनियाको वनस्पति कस्तो छ? धेरै विविध, तर यो विविधता अष्ट्रेलियामा सामान्यतया हो, सम्पूर्ण क्षेत्रमा होइन। अष्ट्रेलियामा यी भूदृश्यहरुमा विशिष्ट वनस्पतिसहित वर्षावन, हिमाल, समुद्री तट, मरुभूमि छ। जीव जन्तु पनि त्यस्तै हो।
ओशनियामा मौसम कस्तो छ? खैर, प्रशान्त टापुहरूमा यो बरु हो उष्णकटिबन्धl, मानसूनको साथ, नियमित वर्षा र चक्रवातहरू। अन्य भागहरूमा, अष्ट्रेलियाको क्षेत्रको एक निश्चित भागको रूपमा यो एक उष्ण प्रदेशीय, समुद्री र भूमध्यसागरीय जलवायुको साथमा मरुभूमि हो। यो पहाडमा पनि घाम लाग्छ।
यो कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि प्रशान्त टापुहरू, न्युजील्यान्ड र इस्टर टापुको अपवाद बाहेक त्यस क्षेत्रमा अवस्थित छन्। उष्णकटिबंधीय र भूमध्यरेखा बीचमा। यसको मतलब यो हो कि त्यहाँ एक समान जलवायु छ, मौसममा निर्भर तापमानमा केही भिन्नताहरू छन्।
सुरुमा हामीले भनेका थियौं कि ओसिनियामा विकसित देशहरू छन् र विकासशील अन्यहरू छन्। क) हो, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड मात्र विकसित देशहरू हुन् तर अष्ट्रेलियाको यसको छिमेकी भन्दा ठूलो र बलियो अर्थव्यवस्था छ। प्रवेश प्रति व्यक्ति यस देशको क्यानाडा वा फ्रान्सको बराबरीमा छ, उदाहरणको लागि, र यसको शेयर बजार दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो तौलको साथ एक हो।
यसको भागको लागि न्यूजील्याण्डको एक धेरै विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था छ र यो मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मा निर्भर गर्दछ। दुबै राष्ट्रहरुको जनसंख्या धेरै जसो विद्युतीय उद्योग, निर्माण र खानीबाट आएका छन्। तर के प्रशान्त टापुहरू? यहाँ अधिकांश व्यक्तिहरू सेवाहरूको क्षेत्रमा काम गर्दछन्, विशेष गरी वित्तीय र पर्यटन।
टापुहरू तिनीहरूले प्राय: नरिवल, काठ, मासु, पाम तेल, कोको, चिनी, अदुवा उत्पादन गर्दछ, अन्य उत्पादनहरूका बीच, र स्पष्ट रूपमा अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड र एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूसँग घनिष्ठ वाणिज्य सम्बन्ध कायम गर्दछ।
तर हामीले भनेका थियौं पर्यटन तारा हो यहाँ वरिपरि र यस्तै छ। ओशिनियाका अधिकांश पर्यटकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र जापानबाट आएका हुन्। सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको देशहरूs डब्ल्यूटीओ अनुसार, स्पेनिश मा विश्व पर्यटन संगठन, तिनीहरू अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र गुआम हुन्।
अष्ट्रेलिया एक महान अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्य हो, एक बर्ष लगभग million मिलियन आगन्तुकहरु जो सिड्नी बन्दरगाह र यसको ओपेरा हाउस, गोल्ड कोस्ट, तस्मानिया, ग्रेट बैरियर रीफ वा भिक्टोरियाको तटमा हेर्न आउँदछन् वा Ayers Rock, उदाहरणका लागि।
न्युजील्याण्ड पनि एक लोकप्रिय गन्तव्य हो, विशेष गरी जब यसको परिदृश्य लोकप्रिय रिंग्स त्रिक्रीको लागि सेटिंग थियो। हवाईको टापुहरू वर्षभरि लोकप्रिय छन्, तिनीहरूको समुद्र तटहरू, तिनीहरूका ज्वालामुखीहरू, आफ्ना राष्ट्रिय पार्कहरूको लागि।
सत्य यो हो कि यदि यस क्षेत्रले १ countries देशहरू समावेश गर्दछ भने, तिनीहरू सबै एकल यात्रामा यात्रा गर्न असम्भव छ। तर यदि तपाई गन्तव्य युरोप भन्दा धेरै फरक पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ भने तपाई जानु पर्नेछ र जान्नु हुन्छ तपाईले खोज्नु भएको छ धेरै संस्कृतिहरू, धेरै परिदृश्यहरू, धेरै भाषाहरू, धेरै व्यञ्जनहरू। पैसाको साथ एक विशेष क्षेत्रमा क्रुजको लागि भुक्तान गर्न सजिलो हुनेछ र विभिन्न गन्तव्यहरू भ्रमण गर्नुहोस्, पैसा बिना र तपाईंको काँधमा ब्याकप्याकसहित, गन्तव्यहरू सानो हुँदै गइरहेका छन् र हामीलाई कार्यक्रमको राम्रो गतिविधिको आवश्यकता छ।
तर मूलतः आजकल ओशिनिया जोडीहरू, साथीहरू र परिवारका लागि लोकप्रिय गन्तव्य हो समुद्री तटहरू, ठाउँहरू खोज्दै डाइभ वा स्नोर्केल, विभिन्न पानी गतिविधिहरू, समुद्री जनावरहरू, कोरलहरू हेरेर ... संक्षेपमा, यो सँधै आरामदायक बिदा हुन्छ, सजिलो छ तिनीहरू यहाँ वरिपरि भन्छन्।
पर्यटन द्वारा प्राय: गन्तव्यहरू फ्रान्सेली पोलिनेशिया हो, सय भन्दा बढी टापुहरु संग, र फिजी, एक देश जुन बदले 200 थप टापुहरू समावेश गर्दछ। यहाँ केहि सस्तो छैन, तर केटा ती राम्रा ठाउँहरू छन् मौइ, बोरा बोरा... तपाईं आफ्नो यात्रा अष्ट्रेलियामा शुरू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट अन्य गन्तव्यहरूमा उफ्रन, वा अस्ट्रेलिया र न्यूजील्यान्ड, वा केवल ठूलो प्रशान्त टापुहरूमा फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले नक्शा लिनु पर्छ र राम्रोसँग योजना बनाउनु पर्छ जहाँ तपाईं जान चाहानुहुन्छ किनकि मैले भनें, एकै यात्रामा सम्पूर्ण ओसिनियालाई कभर गर्न असम्भव छ।
के तपाइँ आधुनिक शहरहरू चाहानुहुन्छ? अष्ट्रेलिया वा न्यूजील्याण्ड गन्तव्य हो। के तपाईं संसारमा सब भन्दा राम्रो कोरल चट्टान चाहनुहुन्छ? अष्ट्रेलियामा ग्रेट ब्यारियर रीफ तपाईंको मार्गमा छ। के तपाईं शान्त र प्राचीन टापु संस्कृतिको बीचमा सपना समुद्र तटहरू चाहनुहुन्छ? ठीक छ, पोलिनेशिया र फिजी। के तपाईं पागल भीडबाट टाढा महसुस गर्न चाहानुहुन्छ? किरिबाती, सामोआ र सूची मा जान्छ। राम्रो यात्रा!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » ओशिनिया » ओशिनिया देशहरू
सालामानका प्लाजा मेयर
विश्वका ठूला देशहरू